people Nepal » अप्रेशनपछि बिरामीको मृत्यु भएपछि नेशनल सिटी अस्पतालमा तनाव अप्रेशनपछि बिरामीको मृत्यु भएपछि नेशनल सिटी अस्पतालमा तनाव – people Nepal
अप्रेशनपछि बिरामीको मृत्यु भएपछि नेशनल सिटी अस्पतालमा तनाव
Posted on February 12, 2018 by Durga Panta
चितवनको भरतपुरस्थित नेशनल सिटी अस्पतालमा पत्थरीको अप्रेशनपछि बिरामीको मृत्यु भएपछि बिरामीका आफन्त आक्रोशित भएका छन् । चिकित्सकको कमजोरीका कारण गुल्मीका ७० वर्षीय होमलाल भण्डारीको मृत्यु भएको आफन्तले आरोप लगाएका छन् । भण्डारीको डा निर्मल लामिछानेले अप्रेशन गरेका थिए । उनी भरतपुरको बीपी मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा समेत कार्यरत चिकित्सक हुन् ।
शुक्रबार अस्पतालमा भर्ना भएका भण्डारीको शनिबार राति अप्रेशन भएको थियो । अप्रेशनलगत्तै बिरामीलाई आईसीयूमा राखिएको थियो ।
अप्रेशनपश्चात् बिरामी होसमा नआई मृत्यु भएपछि चिकित्सकले लापर्बाही गरेको भन्दै आफन्त आक्रोशित भएका थिए । बिरामीका परिवार र आफन्त आक्रोशित भएपछि अस्पताल प्रशासनले आर्थिक प्रलोभन देखाएर घटनालाई गुपचुप पारेको हो ।
अस्पतालसँग सहमति भएपछि आफन्तले शव बुझेका छन् । पीडित परिवारलाई ६ लाख रुपैयाँ दिने प्रलोभनमा घटना गुपचुप राखिएको बिरामीका एक आफन्तले जानकारी दिएका छन् ।
यस विषयमा अस्पतालका म्यानेजर विक्रम अधिकारीले अस्पतालको कमजोरी ढाकछोप गर्दै प्रशासनले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेका कारण बिरामीका आफन्तसँग सहमति भएको खुलासा गरे ।
उनले बिरामीको मृत्यु हुुनुमा अस्पतालको कुनै दोष नरहेको दाबी गर्दै बिरामीको उपचारमा लागेको खर्च मिनाहा गर्ने सहमति भएको बताए । तर, उनले आर्थिक क्षतिपूर्तिको विषयमा भने खुलाउन चाहेनन् ।
मृतकका एक आफन्तले अस्पतालसँग कुरा मिलिसकेकोले मिडियामा नल्याइदिन आग्रह गरे । उनले भने “अस्पतालसँग कुरा भएको छ । सबै खर्च र केही क्षतिपूर्ति दिने सहमति पनि भएको छ ।” उनले कति रकममा सहमति भएको भन्ने विषयमा भने खुलाउन चाहेनन् ।
उपचारमा संलग्न अस्पतालका एमडीसमेत रहेका डा. निर्मल लामिछानेसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन् ।
चितवनका विभिन्न अस्पतालमा चिकित्सक र अस्पतालको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु हुने गरे पनि आर्थिक प्रलोभनमा घटनालाई गुपचुप राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
बाँकेमा हत्या आरोपीलाई समात्न प्रहरीद्वारा गोली प्रहार
इलाममा डा. केसीको उपचार असम्भव, धरान ल्याउने तयारी
तीनवर्ष लगातार जग्गा बाँझो राखे ३ लाख जरिबाना !
जाडो महिनामा चाँयाको समस्याबाट यसरी छुट्कारा पाउँनुहोस्